ဒေတာတစ်ခုကို Mac တစ်ခုမှအခြား Mac သို့ဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းမလဲ ငါက Mac ပါ
ပထမနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင့်အားပြောပြရန်မှာ၊ ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများမှာဤရွှေ့ပြောင်းခြင်း (သို့) အချက်အလက်တစ်ခုအား Mac တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းများရှိသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကငါတို့ရဲ့ PC ကနေအချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အသစ်သို့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒါကနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခု။ ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီအကြောင်းကိုငါတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အဟောင်းမှအချက်အလက်အားလုံးကိုမည်သို့ရွှေ့ပြောင်းရမည်နည်း FireWire or Thunderb cable သုံးပြီး Mac အသစ်သို့သွားပါolt ။
1 ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း, backup လုပ်ထား
2 နှစ်ခု Mac များချိတ်ဆက်ခြင်း
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း, backup လုပ်ထား
ပထမ ဦး ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့လုပ်ရန်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အဟောင်းကို backup လုပ်သည်ဒါမှမဟုတ်။ ၎င်းသည်ပြသနာများသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Time Machine ကိုမသုံးလိုပါကပြင်ပ hard drive တစ်ခုပေါ်တွင်မိတ္တူပွားနိုင်သည်။ ဤအဆင့်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
နှစ်ခု Mac များချိတ်ဆက်ခြင်း
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့စက်နှစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Thunderbolt (သို့) FireWire ကေဘယ်လ်ကိုသုံးမယ်။ အချက်အလက်များကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်းသင်ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mac နှစ်ခုကိုကေဘယ်လ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ် ငါတို့ Mac အဟောင်းကိုကြိုက်လျှင် OS X Mountain Lion လည်ပတ်ရေးစနစ် (သို့) အစောပိုင်းသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနေလျှင် firewire cable ကို ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာရန်ကိုအသာပုတ်ပါ boot တက်နေစဉ်အတွင်း T key ကိုဖိထားပြီးမူလကွန်ပျူတာကို reboot လုပ်ပါ အတွက်စတင်ရန် ပစ်မှတ် disk ကို mode ကို။
အခုကစားပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အသစ်ပေါ်တွင် connection wizard ကိုဖွင့်ပါ နှင့်ဤအဘို့ငါတို့သုံးနိုင်သည် Launchpad, မီနူးကိုအသုံးပြုပါ Utilities ကိုသွားပါ အသုံးပြုသည့် wizard ကိုရှာပါ Spotlight ကို။ တစ်ကြိမ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အသစ်သည်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းကိုတောင်းဆိုသည်, သင် select လုပ်ပါထိတွေ့ပါလိမ့်မယ် Mac စက်၊ Time Machine backup သို့မဟုတ် startup disk မှပြီးတော့ငါတို့လုပ်တယ် Continue ကိုနှိပ်ပါ.
ပစ္စည်းကိရိယာအဟောင်းကိုရွေးပါမည် မည်သည့်နေရာမှကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်အားလုံးကိုရွှေ့ပြောင်းလိုသည်ကိုနှိပ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်သွားမည်။ ဆက်လုပ်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်က လုံခြုံရေးကုဒ် ကွန်ပျူတာနှစ်ခုလုံးမှာအတူတူဖြစ်ရမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အဟောင်းကိုနှိပ်ခြင်း.
အခုဒီအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ် ဒေတာလွှဲပြောင်းစတင်ပါ Mac ကအဟောင်းမှအသစ်သို့ပြောင်းချင်သောအချက်အလက်ကို Apple ကခွင့်ပြုသည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အဟောင်းတွင်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ထက်ပိုသောသူရှိသည်ငါတို့လုပ်ရမယ့်ဟာက အသုံးပြုသူအိုင်ကွန်ဘေးရှိတြိဂံကိုနှိပ်ပါ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီမှသင်ပြောင်းရွှေ့လိုသောအကြောင်းအရာကိုမရွေးပါ
ရသောအခါ ကျနော်တို့ပြီးသားရွေးချယ်ထားသည့်ဒေတာရှိသည် Continue ကိုနှိပ်ပြီး Migration Assistant မှဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အသစ်သို့လွှဲပြောင်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းပြီးဆုံးပါက Mac အသစ်ထဲသို့ login ၀ င်းဒိုးထပ်မံပေါ်လာပြီးအတိတ်ဖိုင်များကိုယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်များသောအားဖြင့်အချိန်လိုသည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှည်ပါ၊ ၎င်းကိုပြီးဆုံးသည်အထိမပိတ်ပါနှင့်။
ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုစနစ်တကျလိုက်နာရန်လိုပြီး၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရပါ။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဒေတာများကိုမလွှဲပြောင်းနိုင်ပါက Apple စတိုးသို့တိုက်ရိုက်သွားခြင်းသို့မဟုတ် Apple ၏နည်းပညာအကူအညီပေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကူအညီတောင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဟောင်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ Apple Store ကိုယူပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ တစ် ဦး Genius လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mountain Lion သို့မဟုတ်အစောပိုင်းဗားရှင်းရှိ Mac မှအချက်အလက်များကိုမည်သို့ပြောင်းရွှေ့မည်နည်း
Mac App Store သည်ရရှိနိုင်သည့် application ၂၅၀၀၀ ကိုမရောက်ရှိပါ